मृगौला पिडित सोफियाको लागी यी दुई ब्याक्तीले गरे रु १,००,००१ सहयोग ! – Rastriyapatrika
मृगौला पिडित सोफियाको लागी यी दुई ब्याक्तीले गरे रु १,००,००१ सहयोग !
बेलायतवासी रेस्टुरेन्ट ब्यबसायी टिकाराम खराल र सागर भण्डारीले दुबै मृगौलाले काम नगरी उपचारत सोफिया अधिकारीको लागी रु १,००,००१ को सहयोग गरेका छन। सोफिया अधिकारी केबल १६ बर्षकी किशोरी हुन। पारिबारिक आर्थिक अबस्था र महंगो उपचार खर्च भएको कारण परिवारले स्कटनेपाल मार्फत गरेको आर्थिक सहयोगको अपिल लाई खराल र भण्डारीले आनकान नगरी खुसीले यो रकम उपलब्ध गराएका छन।
गुल्मी जिल्लाको आपचौर र इन्द्रेगौडा बाट करिब १२ बर्ष पहिला बेलायत आएका खराल र भण्डारी स्कटल्याण्डको एडिनबर्गमा परिवार सहित रेस्टुरेन्ट ब्यबसाय गरी बस्छन। वर्क परमिटमा बेलायत आएका खराल र भण्डारी निकैनै मेहनत गरी अहिले आफ्नो रेस्टुरेन्ट ब्यबसायमा सफलता हासील गरेका छन् र स्कटनेपालको यो प्रयास निकैनै सर्हानिय बताए।